Sidee ceeryaantu u samaysantaa | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah ifafaalaha saadaasha hawada dhib badan in la saadaaliyo shaki la'aan waa ceeryaamo. Ma aha wax ka badan sameynta daruur weyn oo heer dhul ah oo leh a 100% qoyaan. Caadi ahaan badanaa waa mid ku soo noqnoqda meelo badan oo dalka ka mid ah iyo bilaha ay sida caadiga ah si isdaba joog ah u muujiso waa disember iyo janaayo. Marka xigta wax yar ayaan kaaga sheegayaa wax ku saabsan dhacdadan xiisaha leh ee khatarta badan leh.
Fog foomamka xaaladaha xasilloonida buuxda, dabayl la'aan iyo iyadoo ay jirto xinjirowga lidka ku ah. Caadigu weligiis kuma abuuri karo xinjir. Dhacdadani waxay soo bilaabataa markii heer kulku hooseeyo lakabyada ka hooseeya kuwa sare, yacni, marka ay caasimadda ka qabowdo badweynta siiraanyo ama buuraha.
Marka loo eego xogta ay maamusho AEMET, magaalada leh maalmaha ugu badan ee ceeryaamo sanadkiiba waa ValladolidZaragoza iyo Salamanca ayaa raaca. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira aagagga jasiiradda Tenerife, oo aad iska diiwaangelin karto celcelis ahaan 60 maalmood sanadkii oo leh bangiyada ceeryaanta.
Ceeryaamo gabi ahaanba waa aan waxyeello u lahayn caafimaadka, in kasta oo ay dad badani ka fikiri karaan. Maalmaha ay jiraan ceeryaamo, maadaama aysan dabeyl ku jirin hawada, wasakheynta ayaa aad uga weyn maalinta caadiga ah, hase yeeshee ceeryaantu uma xumeyso jirka. Hawada lagu dhex neefsan doono gudaha bangiga ceeryaanta ayaa la mid ah haddii aysan dhacdadan dhicin, waxa ay ku kala duwan yihiin waa a urursiga sare ee uumiga biyaha.
Waxaan rajaynayaa inaan cadeeyay shakigaaga badan ee ku saabsan dhacdadan saadaasha hawada guud bilaha jiilaalka taasina waxay ka dhigaysaa aragtida mid aad u dhib badan darawalada, iyadoo qatar weyn ku ah wadista baabuurta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sidee ceeryaantu u samaysantaa
Waa maxay cabirka kuleylka?